हजुरको एक शेयरले रिताले नयाँ जीवन पाउन सक्छिन्, कृपया शेयर गर्नुहोला – Pahilo Update
हजुरको एक शेयरले रिताले नयाँ जीवन पाउन सक्छिन्, कृपया शेयर गर्नुहोला
भन्छिन थेरापी गराए त सन्चो हुन्छ होला तर पैसा छैन
By Desk Last updated Nov 20, 2019
पहिलो अपडेट मंसिर ४, अर्घाखाँची
कर्म पाएको घरपरिवारको अत्तोपत्तो छैन, संगै जीउने संगै मर्ने कसम खाएका श्रीमानलाई पनि उनले चार वर्ष अघि गुमाइसकेकी छन् , बुढेसकालमा छोराछोरीको साथ पाएर खुसी बाँड्ने सपना बोकेका बुवाआमालाई खुसी दिनुको साटो आफ्नै सुसारमा व्यस्त छन् । हुर्कदै गरेका छोराछोरीहरुलाई परबाट हेर्न र मुसार्न बाहेक केही गर्न नसक्ने रीता हल न चल भएर विस्तारामा लडेकी छन् ।
करीव १७ महिना अघि घाँस काट्ने बेला खन्युको रुखबाट लडेर घाईते भएकी अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थाना नगरपालिका वडा नं. ३ ठूलाखर्क घर भएकी रिता निरन्तर विस्तारामा छन् । घटनापछि निकै खर्च गरेर रिताको उपचार गरियो । गाउँघरदेखी विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मबाट बुवामाआले गरेको सहयोगको अपिलपछि शान्ति मा बि भु पु बिध्यार्थी संघ यु ये इ लगायतका सहयोगीदाताहरुको सहयोगमा रीताको स्वास त बच्यो तर उठ्नै नसक्नेगरी । उपचारको क्रममा भगवानले उनलाई स्वास त दिए तर कम्मरमुनीको भागै नचल्नेगरी ।
१२ वर्षको छोरा र ९ वर्षकी छोरीलाई मातृस्नेह दिनुपर्नेबेला हल न चल भएर विस्तारामा लडेकी रिता अझैपनि उपचार पछि निको हुने विस्वासमा छन् । उपचारपछी निको त होला तर उपचार गर्ने पैसा छैन रिताले भक्कानिदै भनिन । थेरापी भएपछि सन्चो होला भन्ने आश त छ तर थेरापी गर्नको लागि पैसा छैन । आफ्नो हालत यस्तो भएपछि ती अवोध बालबालिकाहरुको लागि कसैले सोच्दीए हुन्थ्यो भन्ने पनि रितालाई लागेको छ ।
दैव पनि कति निष्ठुरी छ, जहाँ होचो त्यही घोचो भनिएजस्तो घरको बेवास्ता अनि श्रीमान समेत गुमाएर माइतमा बस्दै आएकी रीताको खुसी शायद भगवानले देख्न चाहेनन वा देख्न सकेनन । कल्कलाउदो उमेरमा विस्तारामा हल न चल भएर थला परीरहेकी छन् ।
सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा विचार व्यक्त गर्नुहोला ।
आलमलाई मध्यराती काठमाडौँ ल्याइयो
समाचार प्रभाव : रिताकाे उपचारमा गुराँसले सहयाेग गर्ने